zimbabwe – magwada
Greenhouse imba yakavakwa nemagirazi inoita kuti chiedza nekudziya kwekunze kupinde mukati mayo asi isingazobudise kudziya uku kunze kwayo. Basa rayo nderekuti zvive nyore kurima zvirimwa kunyika dzinotonhora kana dzava munguva yechando.
Muenzaniso weGreenHouse ( mufananidzo kubva kuGreenhousess Zimbabwe)
Mweya irimuchadenga (atmosphere) inoshanda seGreenhouse, inoita kunge gumbeze rinoita kuti pasi rino ringe richidziya. Pasina hugreenhouse uhwu pasi rino ringadai richitonhora zvekuti hapana chaikwanisa kurarama. zvisinei, zviito nezviitiko zvinokonzerwa nevanhu zvakonzera kuti mweya yakawandisa yegreenhouse iungane muchadenga, zvakonzera kuti pasi rino rinyanyise kudziya,chinova chiitiko chinozivikanwa nekuti global warming. Mweya inoita kuti kudziya kwekunze kusabude inozivikanwa nekunzi greenhouse gases.
Mufananidzo uripazasi unoratidza mabatirwo anoitwa magreenhouse gases muchadenga zvobva zvakonzera kudziya kwenyika (global warming).
mufananidzo kubva mubhuku “Climate change in Zimbabwe” rakaburitswa neveResearch and Advocacy Unit
Kudziya kwekunze kwemuchadenga (atmosphere) kunokonzera shanduko zhinji, kusanganisira kunyungudika kwemagodo echando (ice) nemazaya echando (snow) arimumakomo neari kuNorth neSouth pole.
Kuwedzera kweuwandu hwemvura irimumakungwa kunoenderana nekunyunguduka kunenge kuchiita magodo echando. Global warming inokanganisawo mafambiro anoita mhepo inobva mugungwa zvinobva zvakonzera kushanduka kwemanairo anoita mvura uye zvoita kuti tive nemamiriro ekunze asina kunaka akaita sekunaya kwemvura inemhirizhonga, mafashamu, moto nekusanaya kwemvura.
Zviito zvevanhu, sekupisa marasha (coal) kana oiri (zvinozivikanwa semafossil fuels) mumaindustry, munezvekufambisa uye mukugadzira magetsi, zvinobuditsa magreenhouse gases achienda muchadenga. Kurima pachikero chakakura (large scale commercial farming) nekutema miti yemasango zvinokonzerawo mukuwedzerwa kwemagreenhouse gas.
Mweya weCarbon Dioxide CO2 unonyanyobva mukupiswa kwema fossil fuel uyewo mukutemwa kwemasango nemamwewo mashandisirwo evhu.
Methane (CH4) inonyanyobva mukupfuiwa kwezvipfuyo nemutsvina yakasiyana-siyana. Nitrous oxide inonyanyobva munezvekurima zvinosanganisa kushandiswa kwefetereza. fluorinated gases dzinobva muzvinoitwa mumaindustry, zvemafiriji nezvimwe zvinoitwa nevanhu.
(translated from Climate Change in Zimbabwe by the Research and Advocacy Unit)
Posted on September 6, 2017 Categories environmentTags africa, Climate change in Zimbabwe, global warming, mamiriro ekunze, Research and Advocacy Unit, shona, Translation, zimbabweLeave a comment on Chii chinokonzera kusanduka kwemamiriro ekunze? ( What causes climate change?)